2017 - Real or Not
ဒီဇင်ဘာ 20, 2017
Fact Check | The Voice Facebook Page အတု
The Voice Facebook Page အတု ကျွန်တော်တို့ facebook page အတု တွေ အစစ်တွေ ပြောခဲ့တာလည်း ရေပက်မဝင်အောင်ပါပဲ ။ […]
Fact Check |5k ကျော် ဝေမျှနေတဲ့ ဗီဒီယိုနှစ်ခုရဲ့ အဖြစ်မှန်
5 k ကျော် ဝေမျှနေတဲ့ ဗီဒီယိုနှစ်ခုရဲ့ အဖြစ်မှန် အခုတလော5k ကျော် ဝေမျှနေတဲ့ ဗီဒီယိုနှစ်ခုကို ဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင် ပြိတ်သတ်ကြီးရေ […]
ဒီဇင်ဘာ 2, 2017
Fact Check | မေးခွန်းများဖြေကြားပေးခြင်း
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ မေးခွန်းသုံးခုကို လက်ခံရရှိထားပါတယ် ? ဦးအေးမောင်ပါတီက နှုတ်ထွက်တဲ့ကိစ္စ ဦးခိုင်ခိုင်ကျော် သတင်းစာပါပြောတဲ့ စကားတွေက အမှန်လား ဦးဇင်း တစ်ပါးကို […]
နိုဝင်ဘာ 24, 2017
Fact Check | မကြာခင် လာရောက်လည်ပတ်မယ့် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနဲ့ ဆိုင်တဲ့သတင်း
မကြာခင် လာရောက်လည်ပတ်မယ့် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနဲ့ ဆိုင်တဲ့သတင်း တစ်ပုဒ်ပါ။ ဒီသတင်းမှာ တော့ မေးခွန်းမေးမြန်းတဲ့ မိတ်ဆွေပေးတဲ့ မူရင်းပို့စ်က ဖော်ပြထားသလို ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကိုယ်တိုင် ကနေတာ မဟုတ်ပါဘူး
နိုဝင်ဘာ 19, 2017
Fact Check | ကမ္ဘာမြေ အမှောင်ကျမယ်ဆိုတာ အမှန်လား
ကိစ္စက နိုင်ငံခြားသတင်းအမှားတင်တဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကနေ စပြီး တင်လိုက်တဲ့ Hoax တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းကို အင်တာနက်မှာ ရှာကြည့်မယ်ဆို 15 Days of Darkness […]
Fact Check | ငါးဥတွေ မြောက်ကိုရီးယားရေအောက် အနုမြူ စမ်းသပ်လို့ အဆိပ်သင့်ကုန်ပြီဆိုတဲ့ သတင်း
ဒီငါးမျိုးစိတ်တွေက မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ အနုမြူရေအောက်စမ်းသပ်မှုမှာ အဆိပ်သင့်ပြီး ဥတွေဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာပါ တကယ့်အဖြစ်မှန်ကို အက်ထမင်လေ့လာကြည့်တော့ ဒီငါးတွေက မျိုးဥကြွေမှုဖြစ်စဉ်မှာ ထူးဆန်းတဲ့အခြေနေတစ်ခုသာကြုံကြိုက်နေတာသာ ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပွားနေရာကလဲ အစ္စရေး အနီးနားက […]
နိုဝင်ဘာ 10, 2017
မေးခွန်းများဖြေကြားပေးခြင်း ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ မေးခွန်းတွေ ပိုလို့မေးလာကြပါပြီ .. အစုံအစုံပါပဲ ခင်ဗျာ … စာမေးပွဲအောင်စာရင်းတွေ? မြွေသိုက်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ သတင်းတွေ ? လှိုဏ်ဂူရှာတွေ့တဲ့ သတင်းတွေအပါအဝင် […]
Fact Check | မောင်တောမြို့နယ် ကျောက်ပန္တု ကျေးရွာ အနီးရွာများမှာ ARSA အဖွဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ လှိုဏ်ဂူတွေ တွေ့ရှိတဲ့ သတင်း
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်၊ ကျောက်ပန္တုနှင့် သင်္ဘောကွေ့ကျေးရွာများ၌ ARSA အစွန်းရောက် ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားများ ပြုလုပ်ထားသည့် လှိုဏ်ဂူများတွေ့ရှိကြောင်း သတင်းအရ နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်နံနက်ပိုင်းတွင် လုံခြုံရေး […]
နိုဝင်ဘာ 4, 2017
မေးခွန်းများဖြေကြားပေးခြင်း အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ မနေ့က မေးခွန်းတွေမရှိတော့ ဖြေရတဲ့ အက်ထမင်တို့ က အားလျော့ပါတယ် ဒီနေတော့ မေးခွန်းသုံးခုမေးလာလို့ တစ်ပတ်စာ စုပေါင်းပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။